Kuthetha ntoni ukuphupha ivili likaFerris? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Uninzi lucinga ukuba ukuphupha ivili likaFerris luphawu olubi, kodwa inyani yenye kwaye imalunga nokuthintela iimvakalelo. Ewe iimvakalelo ziya kuba namandla kwaye zinokuba zilungile okanye zibi, kuxhomekeke kwimeko yephupha.
Ngokuqinisekileyo kubalulekile ukukhumbula zonke iinkcukacha kunye nokutolika kuya kuba lula kakhulu. Kwangelo xesha, ivili likaFerris yinto yokudlala ekhoyo kwiipaki zokuzonwabisa kwaye izisa iimvakalelo ezininzi.
Ke ngoko, lixesha lokuba uqonde intsingiselo yokuphupha malunga nevili leFerris ngendlela elungileyo kwaye ubone ukuba ayinzima kangakanani.
1 Kuthetha ntoni ukuphupha ivili likaFerris?
2 Iphupha lokuwa kwevili le-ferris
3 Ukuphupha ivili elihamba ferris
4 Ivili lethamsanqa kumdlalo wezinambuzane
5 Ngubani okwivili likaFerris?
6 Ukuphupha ngabantu bewa kwivili likaFerris
7 Emva kwakho konke, ngaba iphupha lihle okanye lilibi?
Ubomi buzele ziimvakalelo kwaye ezinye zilungile, ngelixa ezinye, ngelishwa, zinokuba mbi kakhulu. Imvakalelo yokuba sothandweni ngumzekelo woku, kuba ukuba iphindisiwe ibalasele.
Kwelinye icala, ukuba ayisiyiyo, imvakalelo iba mbi kwaye inokukhokelela kukonzakala okunzima kakhulu. Ukuphupha ivili likaFerris kuzisa le dichotomy kwaye kufuneka itolikwe ngendlela echanekileyo, ihlala ihambelana nemeko. Kwakhona, kubalulekile ukuba ukhumbule iinkcukacha kwaye kubalulekile ukuba zonke iinkcukacha.
Ke ilula kwaye ilingana kuphela neemeko eziqhelekileyo kwaye ujonge ezona ziphambili:
Iphupha lokuwa kwevili le-ferris
Amaxesha amabi yinxalenye yobomi kwaye akukho sizathu sokukhalaza, kuba iingxaki, ngelishwa, azizukusombululwa ngale ndlela. Kwangokunjalo, ukuba uthatha izimo zengqondo kwaye ngendlela elungileyo, utyekelo kukusebenza ngcono.
Ixesha lifikile kwaye lixesha lokuba utshintshe indlela, uzama ukungabinakho ukhetho olufanayo lokujonga ezinye iindlela. Kuyinyani ukuba ukuqhubeka nokuzama into enye kwaye ungatshintshi, kuzisa ithuba elincinci lokusombulula, uyavumelana nam?
Ngesi sizathu, ndiyakumema ukuba uthathe umoya kwaye uzame esinye isisombululo, kuba ithuba lokusebenza lihlala lihle. Ekuqaleni, onke amasimi anokuphuculwa kwaye eyona nto iphambili kukuba izimo zengqondo zezona zibalaseleyo.
Ukuphupha ivili elihamba ferris
Iingxaki zinkulu kwaye ndiqinisekile ukuba uxhathisile ngenkalipho, kodwa kubalulekile ukudlulela phambili. Iindaba zilungile ngokuqinisekileyo kwaye zibonisa inyani ebalulekileyo: isisombululo kwezi ngxaki siza kuza. Imfihlo enkulu ilungile kwaye iingxaki zemali, ezobuqu kunye neemvakalelo ziya kusonjululwa ngokulula.
Ukuphupha ivili lethamsanqa ekuhambeni kubonisa ukuba indlela ojamelana ngayo nobunzima intle. ngendlela efanayo, kusemthethweni kuphela ukuba uyasonwabela isigaba kwaye uyazi ukuba kufana nevili lethamsanqa.
Ngenye imini uya kuba phezulu, kwaye ngosuku olulandelayo unethuba lokuba sezantsi.
Ivili lethamsanqa kumdlalo wezinambuzane
I-omen inomdla kakhulu kwaye imele ukubakho komdlalo oza kukunika ibhaso elifanelekileyo.
Ukuxhakamfula eli thuba, ingcebiso kukukhumbula umhla nenyanga elaphupha ngalo. Cinga ke uphuphe ngo-20/01 kwaye le nyani ibonisa indibaniselwano yokudlala: 2001.
Ukusukela ngoku ukuya phambili, kubalulekile ukuba kukho inkolelo kunye nokucinga okuhle, ngaphandle koko ukubanakho kokusebenza kuncinci. Ngokuqinisekileyo akufanelekanga ukukhankanya enye niche okanye enye, kuba umhla wephupha uxhomekeke kumntu ngamnye.
Ngubani okwivili likaFerris?
Lixesha lokutshintsha kwaye akukho mfuneko yokoyika, nangona le nto ixhaphakile. Umntwana uziva engonwabanga xa etshintsha isikolo, kwaye yinxalenye yoko, kodwa kufuneka koyiswe ngokukhawuleza.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba kukho isayensi efunekayo kwaye isizathu silula: ukufunda izinto ezintsha. Ithuba lokufunda kwangaphambili, ukuba nesimo sengqondo esifanayo, ngelishwa, kuncinci kakhulu.
Ihlabathi kubiza indaleko kunye nokuphupha ivili likaFerris, kule meko, kubonisa ukuba ixesha lifikile lokutshintsha. Ke, ukuba ufuna ukutshintsha imisebenzi, tshintsha kwaye kunjalo, ngaphandle koloyiko lokuzayo.
Ukuphupha ngabantu bewa kwivili likaFerris
Abanye abantu bayabufuna ubukho bakho kwaye kubalulekile ukuba unikele ingqalelo kwiinkcukacha ezimbini ezibalulekileyo: nokuba awubazi abantu. Ukuba uyabazi, bafumane kwaye ubancede, kuba kunokwenzeka ukuba bafuna inkxaso inkulu.
Kananjalo, ukuba awubazi, zilungiselele, kuba umntu uza kulucela uncedo lwakho kwaye luyakulunga ukunceda. Kwelinye icala, ukwenziwa komthetho wesisa kubalulekile kwaye kuyakwenza umahluko kubomi babanye.
Emva kwakho konke, ngaba iphupha lihle okanye lilibi?
Iphupha lihle kakhulu kwaye limele isidingo sokulungiselela iimvakalelo ezinamandla kwiinkalo ezahlukeneyo zobomi. Ke ngoko, imfihlo enkulu kukuhlala novakalelo ezahlukeneyo ngendlela elungeleleneyo.
Ukuphupha ivili likaFerris kubonisa ukukhula, ke, kuyakuvumela ukuba uphile kwiimeko ezahlukeneyo kwaye kube lula ngakumbi.